08.09.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– आफू भन्दा ठूलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् , उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ।”
किनकि ज्ञानसागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध बिच्छेद जस्तै हुन्छ। जब हो नै ज्ञानको प्रारब्धको समय। फेरि भक्ति, तप, दान, पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन! त्यहाँ यो कुनै रसम-रिवाज हुन सक्दैन।
पतित-पावन शिव भगवानुवाच। अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सुनाउनु हुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ जब म यहाँ आउँछु, अनि पतितहरूलाई पावन बनाउन ज्ञान सुनाउँछु, अरू कसैले यो ज्ञान सिकाउन सक्दैन। उनीहरूले पनि भक्ति नै सिकाउँछन्। ज्ञान केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र सिक्छौ, जसले आफूलाई ब्रह्माकुमार-कुमारीहरू सम्झन्छौ। देलवाडा मन्दिर तिम्रो सामुन्ने खडा छ। त्यहाँ पनि राजयोगको तपस्यामा बसेका छन्। जगत् अम्बा पनि छिन्, प्रजापिता पनि छन्। कुमारी कन्या, अधर कुमारी पनि छन्। बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। माथि राजाईको चित्र पनि राखिएको छ। बाबाले कुनै भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्ति पनि उनको गर्छन्, जसले सिकाएर गए। तर उनीहरूलाई थाहा छैन– कसले राजयोग सिकाएर राजाई स्थापना गरेर जानुभएको हो। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ– भक्ति अलग चीज हो, ज्ञान अलग चीज हो। ज्ञान सुनाउने हुनुहुन्छ नै एक, अरू कसैले सुनाउन सक्दैन। ज्ञानका सागर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनु हुन्छ। अरू जति पनि सत्संग छन्, त्यहाँ कसैले पनि ज्ञान सिकाउन सक्दैन। हुन त आफूलाई श्री श्री १०८ जगतगुरु, भगवान पनि भन्छन् तर यस्तो केही भन्दैनन्, म सबैको परमपिता ज्ञानको सागर हुँ, उनीहरूलाई कसैले परमपिता परमात्मा त भन्दैन। यो त तिमीले बुझेका छौ– परमपिता पतित-पावन हुनुहुन्छ। यी प्वाइन्टहरू बुद्धिमा राम्ररी राख्नुपर्छ। मनुष्यहरूले भन्छन्– यी ब्रह्माकुमारीहरूले त भक्तिलाई छुटाइदिन्छन्। तर ज्ञान पाएपछि, भक्ति त छुटि नै हाल्छ। यस्तो होइन– भक्ति सुरु गरेपछि मात्र हामीले ज्ञानलाई छोडिदिन्छौं, त्यतिबेला यो थाहा हुँदैन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा रावण राज्यमा आउँछ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ– बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। राजयोगको ज्ञान हो, यसलाई भक्ति भनिदैन। भगवान ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँले कहिल्यै भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्तिको फल हो नै ज्ञान। ज्ञानद्वारा नै हुन्छ सद्गति। कलियुगको अन्त्यमा सबै दु:खी छन्। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँलाई दु:खधाम भनिन्छ। यी कुरालाई अहिले तिमीले बुझ्छौ। बाबा आउनु भएको छ भक्तिको फल अर्थात् सद्गति दिन। राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। यो हो पुरानो दुनियाँ, जसको विनाश हुन्छ। हामीले राजाई चाहिन्छौं नयाँ दुनियाँमा। यो राजयोगको ज्ञान हो। ज्ञान सिकाउने एउटै परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ, कृष्णलाई होइन। कृष्णको महिमा भिन्नै छ। अवश्य अघिल्लो जन्ममा यस्तो कर्म गरेका थिए, त्यसैले राजकुमार बनेका हुन्।
अहिले तिमीले जानेका छौ– राजयोगको ज्ञान लिएर हामी नयाँ दुनियाँमा स्वर्गको राजकुमार-राजकुमारी बन्छौं। स्वर्गलाई सद्गति, नर्कलाई दुर्गति भनिन्छ। हामीले आफ्नै लागि राज्य स्थापना गरिरहेका छौं। बाँकी जसले यो ज्ञान लिँदैनन्, पावन बन्दैनन् भने उनीहरू राजधानीमा आउन सक्दैनन् किनकि सत्ययुगमा धेरै कम देवात्माहरू हुन्छन्। कलियुगको अन्त्यमा जो यति मनुष्य छन्, ती अवश्य मुक्तिधाममा हुन्छन्। गुम हुँदैनन्, सबै घर जान्छन्। अहिले त बच्चाहरूलाई घर याद आउँछ– अब ८४ जन्मको चक्र पूरा हुन्छ। नाटक पूरा हुन्छ। अनेक पटक चक्कर लगाएका छौं। यो कुरा तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले नै जानेका छौ। ब्राह्मण त बन्दै जान्छन्। १६१०८ को माला हुन्छ। सत्ययुगमा त धेरै हुँदैनन्। सत्ययुगलाई नमूनाको रूपमा पनि देखाउँछन् नि। ठूलो चीजको नमूना सानो हुन्छ। जसरी सुनको द्वारिका देखाउँछन्। भनिन्छ– द्वारिकामा कृष्णको राज्य थियो। अब द्वारिकामा भन्नुपर्छ वा दिल्लीमा? जमुनाको किनार त यहाँ दिल्लीमा छ। त्यहाँ त सागर छ। यो कुरा त बच्चाहरूले बुझेका छौ– जमुनाको किनारमा थियो राजधानी। द्वारिका राजधानी होइन। दिल्ली प्रसिद्ध छ। जमुना नदी पनि हुनुपर्छ। जमुनाको महिमा छ। परिस्तान दिल्लीलाई नै भनिन्छ। ठूलो राजगद्दी दिल्लीको नै हुन्छ। अब त बच्चाहरूले बुझेका छौ– भक्तिमार्ग समाप्त भएर ज्ञानमार्ग आउँछ। यहाँ दैवी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– पछि गएर तिमीलाई सबै थाहा हुन्छ। को-को कति पास हुन्छन्। विद्यालयमा पनि थाहा हुन्छ, फलाना-फलाना यति नम्बर ल्याएर पास भएका छन्। अब अर्को कक्षामा जान्छन्। अन्तिम समयमा धेरै थाहा हुन्छ। को-को पास भएर ट्रान्सफर हुन्छन्। यो क्लास त उच्च छ नि। बेहदको क्लास हो। सेवा केन्द्रहरू दिन-प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। कोही आएर ७ दिनको कोर्स राम्ररी लिन्छन्। एक दुई दिनको कोर्स पनि कम हुँदैन। देख्छन्– कलियुगको विनाश सामुन्ने खडा छ, अब सतोप्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ– बुद्धियोग मसँग लगायौ भने सतोप्रधान बन्छौ। पवित्र दुनियाँमा आउँछौ, पार्ट त अवश्य खेल्नु नै छ। जसरी ड्रामामा कल्प पहिला पार्ट खेलिसकेका छौ। तिमीहरूले नै राज्य गर्थ्यौ, फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ। हिन्दुहरू देवी-देवता धर्मका हुन्। तर पावन नभएका हुनाले उनले पावन देवताहरूलाई पुज्छन्। जसरी क्रिश्चियनहरूले क्राइस्टलाई पुज्छन्। आदि सनातन देवी-देवता धर्म हुन्छ– सत्ययुगमा। सत्ययुगको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ बाबा। अवश्य सत्ययुगमा यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यसैले एक जन्म पहिला यिनीहरूले पुरुषार्थ गरेको हुनुपर्छ। अवश्य त्यो संगम नै हुनुपर्छ, जब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ दुनियाँ हुन्छ। कलियुग परिवर्तन भएर सत्ययुग आउनु छ, त्यसैले कलियुगमा पतित हुन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यी लक्ष्मी-नारायणको चित्र बनाउँछौ वा परिचय छपाउँछौ भने त्यसमा लेखिदिनुपर्छ– यिनीहरूले यो सहज राजयोगको ज्ञानद्वारा अघिल्लो जन्ममा यो पुरुषार्थ गरेका हुन्। केवल राजा-रानी त हुँदैनन्। प्रजा पनि त बन्छन् नि। अज्ञानमा त मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन् केवल पूजा गरिरहन्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ– उनीहरूले पूजा गर्दा केवल लक्ष्मी-नारायणलाई नै हेरिरहन्छन्। ज्ञान केही पनि हुँदैन। मानिसहरूले सम्झन्छन्– भक्ति विना भगवान पाइदैन। तिमीले कसैलाई भगवान आउनु भएको छ भन्यौ भने हाँसोमा उडाउँछन्। भगवान त आउनु हुन्छ कलियुगको अन्त्यमा, अहिले कहाँबाट आउनु हुन्छ! कलियुगको अन्त्यमा पनि किन भनिन्छ, यो पनि जानेका छैनन्। उनीहरूले त कृष्णलाई द्वापरमा लिएर गएका छन्। मनुष्यले जे आउँछ, बोलिदिन्छन्, नबुझिकनै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी बिल्कुलै बेसमझ बनेका छौ। बाबालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। भक्ति बाहिरबाट त धेरै सुन्दर देखिन्छ। भक्तिको आकर्षण कति छ! तिमीसँग त केही पनि छैन। अरू कहीं पनि सत्संग आदिमा गयौ भने अवश्य हल्ला हुन्छ। गीत गाउँछन्। यहाँ त बाबाले रिकर्ड बजाउन पनि मन पराउनुहुन्न। पछि गएर सायद यो पनि बन्द हुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ– यी गीत आदिको सार सबै तिमीलाई सम्झाउँछु। तिमीले अर्थ जानेका छौ। यो पढाइ हो। बच्चाहरूले जानेका छौ– हामीले राजयोग सिकिरहेका छौं। यदि कम पढियो भने प्रजामा गइन्छ, जो धेरै होसियार छन्, उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ किनकि उनीहरूको पढाइमा धेरै ध्यान हुन्छ। त्यसबाट फाइदा हुन्छ। जो राम्ररी सम्झाउनेहरू छन्, उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ। जसले राम्ररी सम्झाउँछन्, उनीहरूलाई सेवाकेन्द्रमा याद गर्छन् नि। ब्रह्माकुमारी त बसेका हुन्छन् फेरि पनि भन्छन् फलानी आए हुन्थ्यो भन्छन्। सम्झन्छन्– यिनी धेरै होसियार छिन्। त्यसैले उनलाई आदर पनि गर्नुपर्छ। ठूलालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। यिनी ज्ञानमा म भन्दा तीक्ष्ण छन्, अवश्य यिनलाई उच्च पद मिल्छ, यसमा अहंकार आउनु हुँदैन। ठूलाको ठूलै इज्जत हुन्छ। राष्ट्रपतिको अवश्य धेरै इज्जत हुन्छ। हरेकको नम्बरवार इज्जत हुन्छ। एक-अर्कालाई सम्मान त गर्छन् नि। वकिलहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। ठूलो मुद्दामा धेरै होसियार वकिल राख्छन्। कसै-कसैले त लाख रूपैयाँको मुद्दा पनि लिन्छन्। नम्बरवार अवश्य हुन्छन्। आफू भन्दा होसियार छन् भने सम्मान गर्नुपर्छ। सेवाकेन्द्र सम्हाल्नु छ। सबै काम पनि गर्नु छ। बाबालाई सारा दिन ख्याल चलिरहन्छ नि। प्रदर्शनी कसरी बनाउने, पूरा ध्यान दिनुपर्छ। म तमोप्रधानबाट सतोप्रधान कसरी बनूँ। बाबा आउनुभएकै हो सतोप्रधान बनाउन। पतित-पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि भन्छन् पतित-पावनी गंगा, त्यसमा जन्म-जन्मान्तर स्नान गर्दै आएका छौं। पावन त कोही पनि बनेको छैन। यो सबै हो भक्ति। भन्छन्– पतित-पावन आउनुहोस्। उहाँ आउनु हुन्छ नै अवश्य संगममा, एक पटक नै आउनु हुन्छ। हरेकको आ-आफ्नो रसम-रिवाज हुन्छ। जसरी नेपालमा महाअष्टमीमा बलि चढाउँछन्। कुनै बलि एकै पटकमा मरेन भने त्यो बलि हुँदैन, त्यो देवीलाई चढाउँदैनन्। यो सबै हो भक्ति मार्ग। हरेकको आ-आफ्नो कल्पना हुन्छ। कल्पनामा अनुयायी बन्छन्। यहाँ त नयाँ कुरा छन्। यी कुरालाई त बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छन्। एउटै बाबाले बसेर सृष्टिको आदि-मध्य-अन्त्यको ज्ञान सुनाउनु हुन्छ। तिमीलाई खुशी हुन्छ– म स्वदर्शन चक्रधारी हुँ, अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। सभामा तिमीलाई मैले भन्छु– सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्यसको अर्थ तिमीले जानेका छौ। नयाँ कोही भयो भने अल्मलिन्छ, यो के भन्यो? स्वदर्शन चक्रधारी त विष्णु हुन्। यो नयाँ कुरा भयो नि। त्यसैले तिमीलाई भन्छन्, बाहिर मैदानमा आयौ भने थाहा हुन्छ।
तिम्रो हो ज्ञानमार्ग। तिमीले ५ विकारमाथि विजय पाउँछौ। यी असुरहरू (५ विकारहरू)सँग तिम्रो लडाईं छ। फेरि तिमी देवता बन्छौ त्यसपछि कुनै लडाईंको कुरा हुँदैन। जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवता हुँदैनन्। तिमी हौ ब्राह्मण, देवता बन्नेवाला, जुन पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। रुद्र ज्ञान यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। ब्राह्मण विना यज्ञ हुँदैन। रुद्र हुनुहुन्छ शिव, फेरि कृष्णको नाम कहाँबाट आयो। तिमी दुनियाँदेखि बिलकुलै भिन्न छौ। र, तिमी छौ पनि कति थोरै। चराहरूले सागरलाई निले। शास्त्रहरूमा कति दन्त्य कथाहरू छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– अब ती सबैलाई भुलेर म एकलाई याद गर। आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ। बाबा त एक हुनुहुन्छ नि। हे परमात्मा वा प्रभु भन्दा त्यतिबेला लिंग याद आउँदैन। केवल ईश्वर वा प्रभु भनिदिन्छन्। आत्मालाई बाबाद्वारा आधा कल्पको लागि सुख मिलेको छ, त्यसैले फेरि भक्ति मार्गमा याद गर्छन्। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ– आत्मा के हो, परमात्मा के हो? हामी सबै आत्माहरू मूलवतनका निवासी हौं, त्यहाँबाट नम्बरवार पार्ट खेल्न आउँछौं। पहिला आउँछन् देवी-देवताहरू। भन्छन्– क्राइस्ट भन्दा पहिला देवी-देवता धर्म थियो। ५ हजार वर्षको कुरा हो। तर उनीहरूले भनिदिन्छन्– ५० हजार वर्षको यो पुरानो चीज हो। तर ५० हजार वर्षको पुरानो चीज कुनै हुन सक्दैन। ड्रामा हो नै ५ हजार वर्षको। मुख्य धर्म हो नै यो। यी धर्महरूका नै भवन आदि हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त रजोगुणी बुद्धिका थिए। अहिले त अझै तमोगुणी बुद्धि भएका छन्। प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछौ। कसैको समझमा कहाँ आउँछ र! ब्राह्मणहरूको नै कलमी लाग्नु छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ– ज्ञान अलग चीज हो, भक्ति अलग चीज हो। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ। त्यसैले भन्छन् पनि– हे पतित-पावन आउनुहोस्, दु:खबाट मुक्त गर्नुहोस्। फेरि गाइड बनेर साथै लैजानुहुन्छ। बाबा आएर आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ। शरीर त सबै समाप्त हुन्छन्। विनाश हुन्छ नि। शास्त्रहरूमा एउटै महाभारतको गायन गरिएको छ। भन्छन् पनि– यो त्यही महाभारतको लडाईं हो। त्यो त हुन्छ नै। सबैलाई बाबाको परिचय दिइराख। तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्ने उपाय त एउटै छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म एकलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ र आत्मा मसँग जान्छ। सबैलाई सन्देश दिइरह्यौ भने धेरैको कल्याण हुन्छ। अच्छा!
एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एकरस अवस्था बनाउने साक्षी द्रष्टा भव
अब यस्तो पेपर आउँदैछ, जुन संकल्प, स्वप्नमा पनि थिएन। तर तिम्रो अभ्यास यस्तो हुनु पर्छ जसरी हदको ड्रामालाई साक्षी भएर हेर्यो भने चाहे दर्दनाक होस् वा हाँसोको होस्, फरक पर्दैन। त्यस्तै चाहे कसैको रमणिक पार्ट होस्, चाहे स्नेही आत्माको गम्भीर पार्ट होस् हर पार्ट साक्षी द्रष्टा भएर हेर, एकरस अवस्था होस्। यस्तो अवस्था सदा एक बाबाको यादमा मग्न भएपछि मात्रै हुन्छ।